musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo » Iyo Balkan inotarisira kukura musika weIndia unobuda
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bulgaria Kuputsa Nhau • Bhizinesi Kufamba • tsika nemagariro • Hospitality Industry • India Kupwanya Nhau • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • North Makedonia Breaking News • vanhu • Serbia Kuputsa Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Waini & Midzimu
Iyo Balkan ndiyo ichangoburwa yeEuropean nharaunda kunongedzera kumusika uri kukura weIndia.
Bulgaria, Serbia neMakedhoniya, imwe neimwe iine yavo yakasarudzika inokwezva, vaisa mushandirapamwe muIndia wekusimudzira kuziva kukuru pakati pevamiriri veIndia uye vafambi.
Bayko Baykov, maneja mukuru, uye Stefan Kirov, maneja mukuru, weBohemia DMC, vakataura kuDelhi musi waAugust 16 kuti dunhu iri rine zvakawanda zvinoyevedza zvinokwezva zvine ruzivo rwakanyatsogadzirwa.
Kirov yakasimbisa kuti mutengo wakakosha zvikuru, sezvo mari yekufambisa, pamwe nekutenga newaini, zvaive zvakachipa muBulgaria nedzimwe nzvimbo dzeBalkan kupfuura munzvimbo zhinji dzeEurope. Izvi zvinofanirwa kuve kukurudzira kukuru kune vafambi veIndia.
Spa, skiing, yakavhurika mamiziyamu, makasino nezvimwe zvinokwezva, pamwe neindasitiri yemafuta nezvinonhuwira, zvakachipa kwazvo munyika dzeBalkan.
Nguva yechando kushanya muBulgaria inewo tarisiro yakanaka.